‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ मा सरकारको हेलचेक्राइँ |‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ मा सरकारको हेलचेक्राइँ – हिपमत
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ निकै कम गरेको पाइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार संक्रमितको सम्पर्कमा आएका ९५ जनाको ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ भएको हो ।
आइतबार, चैत्र २३, २०७६मा प्रकाशित गरिएको
जसपाको ‘दोधारे’ निर्णय ! कसले देला ओलीलाई भोट ?
माधव नेपाललाई प्रदीप नेपालको सुझाव- राजीनामा नदिनुस् अप्ठ्यारो पर्ला
खनाल नेपाल समुहले अध्यक्ष ओलीलाई दियो अन्तिम अल्टिमेटम, यस्तो छ चेतावनी